Liverpool Oo Dalabkeedii Ugu Horeysay Ka Gudbisay Xiddiga Atletico Madrid Saul Niguez.
Home Wararka Ciyaaraha Liverpool oo dalabkeedii ugu horeysay ka gudbisay xiddiga Atletico Madrid Saul Niguez.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay gudbisay dalab furitaan ah oo ku aadan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez , kaasoo lala xiriirinayay inuu ka tagayo Wanda Metropolitano xagaagaan.
Ka dib bixitaankii Georginio Wijnaldum oo ah wakiil xor ah, Jurgen Klopp ayaa la sheegay inuu raadinayo xoojinta khadka dhexe si uu ugu biiro sida Jordan Henderson , Thiago Alcantara iyo Fabinho oo jooga Anfield.
Reds ayaa si aad ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan Saul, inkastoo la sheegay inay tartan adag kala kulmeen kooxda reer Spain ee Barcelona , oo lagu soo waramayo inay soo bandhigtay heshiis isku bedel ah oo u arki lahaa weeraryahanka reer France Antoine Griezmann inuu ku laabto Atletico Madrid.
Iyadoo heshiis noocaas ah uu u dhaxeeyo kooxaha Isbaanishka, Liverpool ayaa la sheegay inay safka hore kaga jirto saxiixiisa, sida laga soo xigtay Diario Sport , Reds ayaa u gudbisay dalab rasmi ah oo furitaan ah 32.4m kooxda Los Colchoneros.
Talaabadan oo kale waxay u muuqan doontaa Jurgen Klopp inuu ku daro koox heysata horyaalka La Liga, ka dib markii Niguez uu door muhiim ah ka ciyaaray guushii ay Madrid ka gaartay horyaalka xilli ciyaareedkii hore, isagoo ciyaaray 33 ka mid ah 38 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Spain.
Isagoo horeyba ugu soo daray safkiisa daafaca xagaagan saxiixa daafaca dhexe ee RB Leipzig Ibrahima Konate , Klopp ayaa diiradda saaray khadka dhexe, iyadoo 26 jirkaan lagu soo waramayo inuu yahay mudnaanta koowaad.
Previous articleChelsea Oo Wadahadal La Gashay Wakiilka Robert Lewandowski.
Next articleChelsea oo loo soo bandhigay Heshiis ay kula wareegi karto Eden Hazard